ဒါလည်း ၀ယ်ကတည်းက ပါတာပါပဲ။ သို့ပေမဲ့ user friendly ဖြစ်အောင် မနည်းလိုက်ပြီး သုံးနေရတယ်။ Office 03 ပဲ ပြန်ပြောင်းတင်မလို့ စိတ်ကူးနေတယ်။
Antivirus အတွက် အသုံးပြုနေတဲ့ software ပါ။ အရင်တုန်းက Kasper ကိုသုံးခဲ့ပေမယ့်လည်း Key ပြဿာနာတွေကြောင့် ရပ်တန့်လိုက်ပါတယ်။ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ ထိထိရောက်ရောက်ရှိတဲ့ software မျိုးကိုပဲ သုံးရတာအဆင်ပြေတယ်။ AVG free edition လည်းကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ avast features လေးတွေကို ပိုသဘောကျလို့ သုံးနေတာပါ။
Spyware နဲ့ adware တွေကို ဖယ်ရှားဖို့အတွက် အသုံးပြုနေပါတယ်။ 1 year key လည်းရထားလို့ သုံးရတာအဆင်ပြေသလို light လည်းဖြစ်ပါတယ်။
Messenger အတွက် ကတော့ အကောင်းဆုံးအနေနဲ့ သဘောထားပြီး သုံးနေတာပါ။ ကျွန်တော့် friend တွေကလည်း gtalk ထဲမှာပဲ ပိုများတယ်လေ။ တစ်ခါတလေတော့ စိတ်ကူးပေါက်ရင် msn ထဲဝင်တယ်။
Movie တွေ၊ software တွေ၊ ebook တွေကို ရှာပြီး ဒေါင်းလုပ် လုပ်ဖို့သုံးနေပါတယ်။ Torrent software ထဲမှာတော့ အကောင်းဆုံးလို့ ထင်ပါတယ်။ သီချင်းတွေရှာဖို့အတွက်ကတော့ Limewire ကိုသုံးတယ်။
GoolePack and Google Desktop
All in one ပုံစံမျိုးဖြစ်လို့ အသုံးပြုနေပါတယ်။ ပျင်းတဲ့အခါ Picasa မှာ ပုံတွေတင်လိုက်၊ Google Earth ကနေ ကမ္ဘာပတ်လိုက်နဲ့ မျိုးစုံ ကြိုးခုန်နေပါတယ်။
Internet ကနေ Flash Movie တွေ Download လုပ်ဖို့နဲ့ သီချင်းနာထောင်ဖို့အတွက် အသုံးပြုနေပါတယ်။ တစ်ခါတလေမှာ radio လည်း နားထောင်ဖြစ်တယ်။
aznv ကနေ Chinese, Korea Movie, Drama တွေကို ကြည့်ဖို့ အသုံးပြုနေပါတယ်။ Lyrics plugin လေးကလည်း သုံးလို့ တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်။
Screen Capture လုပ်ဖို့အတွက် အဓိကထားပြီး သုံးနေပါတယ်။ Photo Edition ပိုင်းမှာလည်း တော်တော်လေး အသုံးဝင်ပါတယ်။
mp3 format မဟုတ်တဲ့ Format တွေကို mp3 ပြောင်းဖို့နဲ့ ipod ထဲကို သီချင်းတွေထည့်သွင်းဖို့အတွက် အသုံးပြုနေပါတယ်။
Light Room and Adobe Photoshop
Photo Editing အတွက် အဓိကထားပြီး သုံးနေပါတယ်။ အခုတလော ဓာတ်ပုံကလည်းရိုက်ဖြစ်နေတော့ သူတို့လည်း မနားရပါဘူး။
ကျွန်တော်နှစ်သက်တဲ့ Blog, Website တွေရဲ့ Feed တွေကို စုစည်းပြီး ဖတ်ဖို့အတွက် အသုံးပြုပါတယ်။
ကွန်ပျူတာ သန့်ရှင်းရေးသမားလို့တောင် ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ Temp file တွေ၊ history file တွေ၊ cookies တွေကို ရှင်းလင်းဖို့အတွက် အသုံးပြုပါတယ်။
Window registry file တွေကို ရှင်းလင်းရေးလုပ်ဖို့အတွက် အသုံးပြုနေပါတယ်။
Website တွေအတွက် file upload လုပ်ဖို့အတွက် အသုံးဝင်တဲ့ ftp software လေးတစ်ခုပါ။ လက်ရှိ ကျောင်း project အတွက် အသုံးပြုနေပါတယ်။
Hight Quality Movie တွေကြည့်ဖို့အတွက် သုံးပါတယ်။
Static and Dynamic Webpage တွေဖန်တီးဖို့အတွက် အသုံးပြုနေပါတယ်။
Acrobat file တွေ ဖတ်ဖို့အတွက် အသုံးပြုနေပါတယ်။
Primary internet browser အနေနဲ့ အသုံးပြုနေပါတယ်။ Addon တွေ Plugin တွေကြောင့် အသုံးပြုရတာ ပိုမိုအဆင်ပြေတဲ့အပြင် Blogger တစ်ယောက်အနေနဲ့လည်း အသုံးပြုသင့်တာကြောင့် စွဲစွဲမြဲမြဲ သုံးဖြစ်နေပါတယ်။
ဆက်ပြီး install လုပ်ဖို့ကျန်တဲ့ software တွေကတော့ Flash နှင့် Adobe Indesign ပါ။ Download လုပ်ထားဆဲပဲရှိသေးတယ်။ သုံးချင်တဲ့ software အကုန်ထည့်လိုက်ရင်လည်း လူ့အလိုကို စက်မလိုက်နိုင် ဖြစ်နေမှာစိုးလို့ ငြိမ်နေရတယ်
Tags: OS, software, operating system, security, browser, firefox, torrent, download
Labels: CMS photography
KhunMoung 6:47 am
sharing yours...good...I'll also write about it...
CMS 6:49 am
ya bro. I would like to read when u post :)
Myo Kyaw Htun 1:07 am
I liked all of the softwares you mentioned here and I'm currently using those.
Ko Chan, try either VLC Player or GOM Player for watching videos in different codec. I prefer light-weight VLC player. ;)
MYO HAN HTUN 8:13 am
မဆိုးဘူး .. မိုက်တယ် ..
CMS 2:17 pm
MKT ... thx bro. I'll use it :)
Ko Toe ... thx bro :)
Mr. White 1:32 pm
office 2007 အင်္တင် office 2003ရဲ့ မန်နျူး ပုံစံ ပြောင်းပေးတဲ့ tools ရှိတယ်..